Sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray shiikh Maxamed Idiris oo sidhow ula socday xaalada masjid hoos ka akhriso qoraalk shiikha Bishaaro asxaabey, waxaan filayaa inaad baraha bulshada bilihii lasoo dhaafay ku aragteen muran xoogaa ka jirey, Masjidkeenna weyn Masjid Tawfiiq ee caasimadda Norway Oslo. Qofba si uga hadal qof…
UNICEF oo shaacisay Liiska caruurta dhashay habeenki 2020 ga
Sida ay sheegtay hay’adda carruurta u qaabilsan Qaramada Midoobey ee UNICEF, qiyyaas ahaan, waxaa maalinta ugu horeysay ee sannadkan 2020-ka dunida ku dhashay carruur gaareysa 392,078. Sideedda dal ee tirada ugu badan ay ku dhasheen waxay kala yihiin: (Xigasho: UNICEF) • Hindiya — 67,385 • Shiinaha — 46,299 • Nigeria…
Hoos ka akhriso warsaxaafadeed UNKA ka soo saaray qaraxi ex kantrool afgooye
Xubnaha Golaha Amaanku waxay sida ugu kulul u cambaaraynayaan weerarkii argagixiso ee 28kii Disembar 2019 ka dhacay isgoyska Ex-control Afgoye ee Muqdisho, halkaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad aan waxba galabsan. Xubnaha Golaha Amaanka waxay tacsi tiiraanyo iyo dareen xambaarsan u dirayaan qoysaska dadkii ay dhibtu soo gaartay,…
Kornayl Siciid Cawil Caare oo hoggaamin jiray jabhad hubaysan ayaa heshiis la gaaray xukuumadda Somaliland. Kornayl Caare ayaa maanta oo Khamiis ah duleedka magaalada Ceerigaabo ciidankiisii iyo hubkoodii ku wareejiyey guddigii dhexdhexaadinta jabhaddiisa iyo xukuumadda Somaliland. Caare oo ka hadlay halkii uu ku wareejinayey jabhadiisa ayaa sheegay in uu wareejinayo…
Xubnaha Guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu Magacaabay Ra’iisul wasaaraha Dalka Xasan Cali Kheyre, ayaa sheegay in xaaladda Magaalada Baladweyne ay tahay mid halis ah. Guddoomiyaha guddiga oo ah Wasiirka gargaarka XFS, Xamsa Saciid Xamsa, oo u warramayay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in Roobabkii da’ay ay xaaladdu ugu sii dareen, kuwaas…
SM Staff August 25, 2019